China Ikwuputa Ibu Izu China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ikwuputa Ibu Izu - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 3 Ngwaahịa maka Ikwuputa Ibu Izu)
150W Na-arụ ọrụ Ụdị Ntugharị 5000K
Obere ọrụ ọrụ anyị dị na 150W bụ 18000 lumens na 120lm / w. Ọrụ Ihie a na- arụ ọrụ zuru oke maka iji na ụlọ nkwakọba ihe, ebe ọrụ na ebe ndị ọzọ na-ewu. Bbier Led Working Light Stand is made from dies cast aluminum aluminum ụlọ na-echebe site na obere tụlee ma na-eguzo n'akụkụ kachasị ọrụ niile. Nke a O utdoor...
240W UFO Led High Bay Ụlọ Ụlọ Izu
Iji ruo 130LM / W arụmọrụ dị ebube, 240W High Bay Light Fixture na ihe mmetụta sensọ bụ otu n'ime ọkụ kachasị elu na ụlọ ọrụ ahụ. Nke a UFO Led High Bay Light 240W na-enye ihe dịka 31,200LM na 800W ọkụ ọkụ obodo ma belata ruo 80% nke ụgwọ eletrik gị. Ihe nkiri anyị na-emepụta ọkụ bụ High Bay Warehouse Light na...
120W Igwe Igwe Igwe Kwadoro N'uzo Na-echekwa Oghere Ibu
Okpokoro Igwe Mmiri anyị dị na mbara igwe 120W abụghị wires na otu dum dị na otu. Mgbanwe Igwe Ụzọ nke a na Ogwe Mmiri bia n'eji ihe nro (ngbanwu aka na abalị, gbanyụọ n'oge chi ọbụbọ) na ihe mmetụta sensọ (gbanwee ọnọdụ na-egbuke egbuke mgbe achọpụtara ngagharị. Ihe niile na- adọba ụgbọala na-adọba ụgbọala na...
Ikwuputa Ibu Izu Okpukpu Uzo Ìhè Ikpuchi Ihu Uzo 300w 100w Igwe Ngwuputa Uhie Ngwurugwu Iju Mmiri Nkoputa 300w Abụọ 30w Mpupu Mpupu Ike 150w Lute Garage Iche Iche